Madaxwayne Farmaajo iyo RW. Khayre oo Dhuusamareeb tegaya iyo Wejiga Labaaad ee Shirka ! | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Monday, July 13th, 2020 | Posted by kalshaale
Madaxwayne Farmaajo iyo RW. Khayre oo Dhuusamareeb tegaya iyo Wejiga Labaaad ee Shirka !
Muqdisho ( Kalshaale ) Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Raâ€™iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa ku sii jeeda magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug, iyadoo si kala gaar gaar ah ay u imaanayaan.
Madaxweyne Farmaajo iyo Raâ€™iisul Wasaare Kheyre ayaa aqbalay martiqaadkii Madaxda dowlad goboleedyada oo ahaa in Shir la isugu yimaado Dhuusamareeb, si looga arrinsado arrimaha doorashooyinka, kaasoo qeyb ka ahaa qodobadii ay ka soo saareen madaxda dowlad goboleedyada shirkoodii Dhuusamareeb.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in Raâ€™iisul Wasaare Kheyre uu tagayo magaalada Dhuusamareeb maalinta berri oo talaado ah halka Madaxweyne Farmaajo maalmaha soo socda uu gaari doono xarunta Galmudug.
Madaxda dowlad goboleedyada oo dhammaantood ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa ku sugnaan doona magaalada, marka laga reebo Madaxweynaha Puntland oo Garowe hal maalin u tagi doona Aaska Madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi iyo Raâ€™iisul Wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Abshir oo lagu aasi doono Puntland, kadibna marka uu aaska ka qeyb galo uu dib ugu soo laaban doono Dhuusamareeb
Wajiga labaad ee shirka Dhuusamareeb ayaa lagu wadaa in xal loogaga gaadho arrimaha khilaafku hareeyay ee doorashada dalka, taasoo ay madaxda dowlad goboleedyada ay aaminsan yihiin inaysanÂ dhici karin doorasho qof iyo cod.
Kalshaale.com Kala soco Wararkii ugu dambeeyay iyo Xogta kusoo korodha.
Short URL: https://kalshaale.ca/?p=29858
Posted by kalshaale on Jul 13 2020. Filed under MAQAL IYO MUUQAAL, WARARKA, XULKA KALSHAALE. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
55 Comments for “Madaxwayne Farmaajo iyo RW. Khayre oo Dhuusamareeb tegaya iyo Wejiga Labaaad ee Shirka !”
July 13, 2020 - 9:09 pm
waa arin wanaagsan oo ey ka muuqato hididiilo is faham waxan aamin sanahay in is afgarad wanaagsan uu ka dhalan doono dhuusameb madaxda maamuladuna aad bey u mahadsan hadii ey inta wax isla garten kula noqden kuwii federalka in sha Allahu guul
waa arin wanaagsan oo ey ka muuqato hididiilo is faham waxan aamin sanahay in is afgarad wanaagsan uu ka dhalan doono dhuusameb madaxda maamuladuna aad bey u mahadsan hadii ey inta wax isla garten kula noqden kuwii federalka in sha Allahu guul madaxda federal kuna waa madahsan yihiin hadii ey aqbalen dalabki maamulada
July 13, 2020 - 9:11 pm
Waan soo dhaweeynaynaa inay ku soo biiraan shirka wajigiisa labaad ee Dhuusamareb, waa talaabo isku soo dhawaansho ah oo horey loo qaadayo.
Isogol, wadatashi iyo isu tanaasul wax dhaama lawaa.
July 14, 2020 - 10:55 am
Asc dhammaan waan idin salaamay
soo kuwii lahaa dawladda ayaa nadhibtay maxay ugu wacdeen?
Dawlad looma wacdo indho qudhaanjo ayey leedahay.
Deni oo sii baxaya ayaan u jeedaa.
July 13, 2020 - 9:14 pm
ASC dhamaantiin, qaasatan Mr. Kalahage ðŸ™‚
Si fiican oo thoughtful ah, si fiican looga fiirsaday ayeey baaq amaba hadal u soo saareen hogaamiyayaasha qabiilada/maamulada Somaliyeed ee Dhuusamareeb ku shiray.
Now, xataa wali wax beey xeerinayaan, ee waxeey aheeyd in eeysan meeshaas ku ekeeyn oo eey si Somalida masaakiinta ah eey fahmi karraan eey u dhahaan â€œSomaliya doorasho qof iyo cod ah kama dhici karta iska daa maantay iyo sanadka soo socdee xataaa 20ka sanno ee soo socotaâ€�.
Xassan Shiiq iyo Farmaajo, iyo daanyeer kasta oo hadeer iyo horray u dhihi jirray doorasho qof iyo cod Ayaan qabaneeynaa waa daanyeer dayuus ah oo dhagta kaliya ka maqlay doorasho cod iyo qof, oo dad beesha caalamka isku sheega eey dhagta uGu sheegeen. Cawaanta madaxda Somalida isku sheegana oo uu uGu horeeya daanyeer Farmaajo malahan karti uu ku dhaho â€œwax waxaan suurtagal maahanâ€�. Laakiin, of course, Farmaajo waxuu u fikirayaa sidii daanyeerkii Afweeyne ee soo tababaray, oo waxuu is dhahay doorasho aanan laâ€™aqoon waxa eey tahay, ku boob xukunka, oo sidii adeerkaa Afweeyne waxaad tiraahdaaa 99.9 dadka qof iyo cod ayeey bixiyeen, anniga ayeeyna i doorteen.
Now, sida aan horray wax badan idinkugu sheegay Somaliya waxa kaliya oo ka suurtowda waa doorasha ku dhisan qabiilada oo ah 4.5 qabiilada oo soo xula baarlamaanka, kadibna eey iyaga doortaan madaxweeynaha. Tani waa doorashadii uu Farmaajo ku yimid, waana qasab in uu qabto doorasha qabiilada dad kooban oo kasoo jeeda sida 275 xildhibaan eey doortaan madaxweeynaha. Xataa waa daanyeero dadka dhahaya dadka codeeynayana ayaa la gaarsiin 10 kun iyo wax lamid ah. Waa qalad in wax laga badala sidii horre oo eey Somalida wax u dooran jirtay. Waa qalad in wax laâ€™isku dilli doona, dalkana qalalaaso galin doona uu daanyeer Farmaajo dhaho waan qaban.
Hadal ayaa laga sugayaa daanyeer Farmaajo, oo uu uga jawaabo in;
Qasab eey ku tahay in uu qabto doorasho lamid ah tii uu kusoo baxay; in uusan hal maalin ku darsan karrin xukunka, iyo in eeysan Somalida maantay aheeyn Somalidii uu Afweeyne handaday 1969kii.
Agoonta kacaanka iyagu waxeey cabeen cool aid kii uu Afweeyne siiyay, marka caqli malahan, oo ma fahmi karraan sida eey impossible u tahay in Somalida doorasho qof iyo cod ah ka dhacdo xataa qarniga soo socda.
Adeer axmed soomaali maxaad ka rabtaa, marti degdegsan ayaa u egtahay is ilaali.
Farmaajo iyo Khayre hal wado idiin furan doorasho tii ku timaadeen oo kale qabta aka 4,5, kala dira Parleman ku dheega aad laaluushka siiseen oo waqtigoodii dhamaaday.
Sidee Parleman waqtigiisii dhaamaday idinka oo waqtiigiinii dhamaaday muddo idinku dari karaan..
1. Doorasho 4.5 waqtigeedii ku qabta ileen mid shacab one man one vote socon maysee.
2. Furaha Villa Somalia u dhiiba guddoomiya aqalka sare sida dastuurka dhigayo, ileen xitaa dooraso ma qaban kartaane.
3. Dagaal u diyaar garooba iyo Xamar cidda ku xoog badnaata aragno…
3daas wax u dhaxeeya ma arko.
Ninkii wax kale ogbha iigu kordhiyo.
kalahage sxb wan ku salamaya marka hore mida labad soo dhaweyntii ayaan kaga fadhiya xiligan la joogo mida adeer axmed somali waxba uma dhimin hadii aan ku idhi adeer hadii aad garoowe isku aamin weysey beledweyne iska sheego waa caadi mida kale wan soo arkay qoraal kaagi aniga waxa ley yira kooshin maxamed Xusen naaneysta aan caanaka ku ahay oo mugud iyo galgaduud la iiga garanaya waa kooshin xeraale waxa laga yaaba hada in rag igaratn duraba magac uun baad wadata heygu odhan sxb
land of punt intaas aad sheektay mooye maba jirto wado kale iyo dooq kale uu ufuran in iyagi loo yeero iyado loosii tashaday bey marayan imaantin kooda dhuusameb adeer noo taliya waxba kama duwana waxan maqli jirey dhawan ku diida dhaaran buu ku doona ninkii diida aan tashano adeer ii tali baa laga helaa hawiye ayaa iiga marqatiya taas
July 13, 2020 - 9:35 pm
Kkkkk Maxaa tiri? Hebeloow Hebelkiis aa Gal-Gaduud la iiga yaqaan a oo waxaa leedahay magac maskiin kama ahi?
Waxaasaa booto lagaa dhahaa, war ninyahow ma qamarji hore aa aheyd, kaftan.com
intaas aad sheektay mooye maba jirto wado kale iyo dooq kale uu ufuran in iyagi loo yeero iyado loosii tashaday bey marayan imaantin kooda dhuusameb adeer noo taliya waxba kama duwana waxan maqli jirey dhawan ku diida dhaaran buu ku doona ninkii diida aan tashano adeer ii tali baa laga helaa hawiye ayaa iiga marqatiya taas
Waxaasaa booto lagaa dhahaa, war ninyahow ma qamarji hore aa aheyd?, kaftan.com.
July 13, 2020 - 9:45 pm
Meeshaad igu ogeyd ayaan wali jooga,
Maanta Adeer Ahmed Somali MINGISKAA laga fooxinaayaa
Asagaa la soo taagan GURIGEYGA NIMAAN HARTI aheyn ma yimaado.
July 14, 2020 - 7:48 am
Dabshid Adeer, maxaad Harti ka taqaan? MA WAXAAD mooday Wada DENI? BAL DAY;
“Harti nimaan oqoon baa yidhaa, hadalka qaarkiise,
Waa nimaan hurmuud wada ah iyo, hanadyo waaweyne
Waa nimanka haybtoodu tahay, Haashinkaas kore e. â‰¤ANIGU MA DHIHIN â‰ˆÂ©â‰ˆINTAA ma kugu filantahay ha fiirin Deniye. WBT
July 13, 2020 - 9:47 pm
Waa si wanaagsan waxaan kula socodsiinayey in hoos lawada fadhiyo odayaashana aan lagu degdegin.
Qofku waxa uu kaala doodo unbaa laga doodaa waxba tari mayso xaafadaa ma tihid.
Khasab ma aha kaliya inaad difaacdo xaafadaada.
Soo dhowow sida kale dood yahan baad tahay.
July 13, 2020 - 9:53 pm
Reer Bari la igama badiyo, waxaan hubaa in markey Governors Maamul beeledyada is weydiiyeen maxey kula tahey iyo maxaad soo jeedin laheyd
– GOVERNOR DENI HAL ARIN AYUU CODSADEY,
In SHIRKA SOO SOCDO LAGU QABTO GALMUDUG
1. si uu u tijaabiyo Diidmo Farmaajo iyo hadduu yimaado nin la siman
si uu ugu faano waligey Xamar ma imaan intuu joogey FARMAAJO- Mudullood maanta idinkaan idiin imid ee Rasalwasaaraha miiska Garowe saara (Waa haddey ku guuleystaan Mudulku HAGBADDA VILLA XAMAR).
3. Waxaa labo Dil ah, hadduu Sade noqdo Madaxweynaha ama Rasalwasaaraha 2021.
* Guul Galmudug, Guul Shirka Bad baado Qaran
Beesha hawiye caadi maaha 82 xisbi ayay hada marayaan kkkkk nin kasta xisbi buu furtay hadana xisbiyadu waa isu wada magac eg yihiin kulli waxaa kujira xisbiga dimoqraadiga saas iyo saas kkkkk
sargaalka sxbow naba doon laga garanayo gobolada dhexe oo dhan baan ahay ee maahi qamarji iyo wiil hoog midna marka sxb sidaas weeye
July 13, 2020 - 10:23 pm
Ok, sorry marka ma ogeyn inaad nabdoon tahay.
Aadam Muuse Jaamac
July 14, 2020 - 2:09 am
Waxaan arkaa in Somalidu u socoto xagga wanaaga.
Waana iska caadi dadku markay isu yimaadaan haday la shir tagaan niyad wanaag iyo daacadnimo wixii laga fishaa waa in ay heshiiyaan.
Intaa waxaan ku darayaa haddiiba dowlad goboleedyada iyo dowlada dhexe magaaladaa ku heshiiyaan waa in magaalada magaca aan shirarka ku wanaagsanayn laga bedelaa,iyadoo loo marayo in lacag lagu bixiyo( tartan ogaysiis loo sameeyo)
July 13, 2020 - 10:20 pm
“Cirka sare shimbir u lalay.
cabbaar waaka dabadeed
Soo dhiga cagaha oo
Ma huraayo ciiddee
Waxay is giijiyaanba labadii qawsaar dantu waxay ku khasabtay inay usoo kala gurkuurtaan Maamuladii ay isu waalayeen.
DENI,AXMED ISLAAM,QOORQOOR OO QIIQ ISKU QARINAYA & WAARE OO AY KALA WARAN JIIDEEN BAA U FADHIYA.
WAXAY QAADAYAAN WAAD QABOOBIYE QUNYAR SOO SOCO
Aduunka waxaa ugu liito nin shaqadiisa loo sheego.
Waa dhamaatay xiligii taladu ka go.aday villa somaliya.
Farta loogu yeeray mana diidi karaan waayoo ayagaa garan waayay in ay howsha qabtaan xiligeedii.
Waxbaan kororsanayaa. Qof iyo cod baan qabanayaa. Doorashadiina waxaa ka haray 7 hilood waa qar iska xoor.
Hadda waxaa loogu yeeray.
1 in doorashadu xiligeeda ku dhacdo.
2 in la aado doorasho dadban oo ka agdhaw tii 2016kii.
3 in aysan sameyn Karin wax aysan heshiis kuwada aheyn saamileyda siyaasadda.
4 in lakala diro gudiga doorashada.
Mr kheyre oo raaxaysanaayo. Iyo Mr farmaajo oo ay mugdi u tahay ayaa wada tegi doono meesha.
Imisaan halkaan ka shegaayay. Madaxweyne farmaajo. In uusan doorasho qaban doonin.
In uu ku fekeraayo wax isbada marin iyo in uu korsiga sii joogo.
Dadbaa ku duceysanaayo. In waqtigu dhamaado een doorasho dhicin.
Villa somaliya waxaa lagu wada joogi karaa warqada lagu heshiiyay oo la dhowro.
Nexst madaxeyne. Waxaan codkeyga siiyay. Mr xasan cali kheyre.
July 13, 2020 - 10:24 pm
Anigu sii baan dawladnima u taageeraa.waxaan rabaa in la helo wax caruurta yaryar ku faanaan siiba kuwa qurbaha.
Caruurta soomaaliyeed ee qurbaha Ku nool wey ka xishoodaan inay soomaaliya sheegtaan.
Dawladaha yaryar hoos ha inooga shaqeeyaan balse ta Weyn ha la wada ilaaliyo.
Marka uu hoganka Hagi waayo taladii loo dhiibay
Waxaa dhacda in iyagii la hogamiyo oo taladii qaranka hogaamiye qabiilaad loo daba fariisto marka
Waa in inta la isu tago dadka somaliyed runta loo
Sheego ma dhici karto doorasho Qof iyo cod ah inta
Dalka UGUS haysto waa in amniga laga shaqeeyo
oo dalka la xoreyo waana in dorasho la qabto 8 da
Februari dabcan dorasho dadban waa inay dhacdaa
July 13, 2020 - 10:32 pm
Xaaraan xaaraan dhalay oo kaleb ah oo bilaa dhaqan iyo akhaaq ah ayaad tahay. Nacallaa isirkaaga iyo faracaaga ku yaale marxuumka maxaa kuu geeeyey? Nijaasyohow tobanka nijaas iska dhashay akhlaaqda xumi.
Sxb cabdulaahi yuusuf. Madaxweyne dalka loo doortay ayuu ahaa. Waana la caayaya waana la aamanayaa. Maxaad ugu gubaneysaa. Sidii in aabahaa wax laga sheegay.
War caadi iska dhig. Nin walbo oo xuriyo loo doorto. Waa kabaxay xayndhaabka reerkiisa.
Bal eeg waxaad qortay.
Salaan sare kaabbe
Waa sidaas marmar waa in la isnabar dhabo kkk
Ragga baa moodaya in cadowtinimo jirto.
July 13, 2020 - 10:42 pm
Salaan sare mudane. Ninyahoow ma xamar ayaad shaqa u doonatay. Xageed ka baxday.
July 13, 2020 - 10:43 pm
Soomaalida Guud ahaan aad ayey u dhaliili jireen Xassan Shiikh lkn labo arimood ayaa lagu amaana
1. Inuu SANAD KAHOR dhahey, soomaaliyeey qof iyo cod ma keenikaro ee ka tashada DOORASHO MID AH
2. DOORASHADDII OO SOCOTO inuu dhahey SOOMAALIYEEY waan ka Tanaasuley WAREEGA kale,
– Lkn sidii Gafuurkaa ii taagan, waxna sheegimahayo waxey ku fadhiisin guri ceebeed.
Prof Faisal Rooble ayaa dhahey waliba asagoo ka Xanaaqsan sharaftuu iska qaadey Madaxweyne Farmaajo (Inuu Madaxweynahii la doortey aamusnaado oo Rasalwasaarihii uu
Magacaabey ICLAAMIYO DOORASHO WAQTIGEEDA dhicidoonto – waxey muujireysaa inuusan daacad ka aheyn doorasho Dalka ka dhacdo.
July 13, 2020 - 10:47 pm
Maya xoogaa nasniiyo ayaa lagu jiray.
Iney Governors Maamul beeledyadu soo saaran 4 qodob oo Shacabku jeclaadey
Iney ku baaqaan shir Bad baado Qaran
Waxey muujireysaa haddaad MASUULIYADDAADA DAYACDO, waa lagaa Jeeb siiba.
Only halka shey ee ka dhaxeeyo
Jowhar iyo Garowe (tusaale ahaan) waa doorasho Afar sanadle ah
– Ciidan kama dhaxeeyo
– Canshuur kama dhaxeyso
– Ciid kama dhaxeyso
– xitaa Calan kama dhaxeeyo
Qof nool ayaa lala doodaa oo waxaad doono ka sheegi kadhaa laakiin qof dhintey lama caayo haddaad doonto-se siyaasadiisii dhaliil.
Ahu. Siyaad Barre, kuwii la shaqeeyey bilow ilaa dhammaad iyo siyaasadisii intaa waan dhaliilaa weli ma aragtay anoo caayaya? Siyaad iyo Cali Samatar
Aduunka oo dhan maamul hoosadyo waa wada leeyahay mana abuun buuniyaa inaga ceebteenu waa in aan rabno maamulada hoose inay ka sareeyaan dawladii dhexe.
Anigu ma maqal dawladda oo leh doorasho ayaan dib u dhigeynaa ilaa maalintii la doortay.
Waligood waxay lahayeen doorasha waqtigeeda ayaa lagu qaban wixii xan ah waa gooni.
Soomaalida waxaad moodaa inay hal dheg leeyihiin.
Maamulada iyo dawladu hada iskuma dhin iyada oo aan hal sano jirin ayey dagaal ku bilaabeen.
Waa tii ay lahayeen anag ayaa xukunna wadanka %95
Denbiyadii ay galeen oo dhan ayey rabaan inay doorasha ku baabiâ€™iyaan.
July 13, 2020 - 10:59 pm
sxb wan kaa qaatay aad baana u mahad San tahay goba xaal bixisa gob baana ka qaadata
July 13, 2020 - 11:13 pm
waxan maqli jirey dhowan ku diide dheeran ayuu ku doona owrta is giijin badan iyo safaro badan iyo iboor isku qaris badan kadib sheekadu waxey mareysa qoor qoor iigeeya aad bey uga mahadsan yihiin maamuladu qaabka ey wax u dhigeen iyo go aanka ey qaateen waxana leeyahay rabi haku duwo madaxda iney qaatan taladas oo iska dhigaan meel hamiga xun ee kujira
iyo mudo kordhin waan yaabay 4 sano ayaan wax qaban waayey 4 bilood baan kuqabanaya doorasho qof iyo cod ah
July 13, 2020 - 11:16 pm
adeeow hadii loogu dari lahaa laba sano oo kale sow safar ugama dhamaten iyo adis ababa ayaan geego ku beeray iyo afawarqi ayaan balan sanahay sow sidaas kuma dhamateb ????
July 13, 2020 - 11:43 pm
Markaan dhinaca kale ka eegno.
Waxaa jira shaki ay dadku qabaan. Waayoo dadka waxaa ka dhexguxaayo xukunkii ina siyaad barre ee 21 sano. Markii danbana kusoo dhamaday in lagu kala tago dowladnimadii.
Farmaajo waa caruurtii uu siyaad barre wax barashada u diray. Reer ahaana waa isu leeyihiin.
Markaad fiiriso dhaqanka farmaajo. Aamusnaantiisa. Qaabka bulshada loo maran habaabinaayo. Dad yar inta meel leeskugu keeno la leeyahay waa xoogaga wadaniyiinta.
In mar walbo la qariyo wax qabadka dowladihii ka horeeyay. Sida loo buunbuuninaayo xisbiga uu hogaamiyo.
Sida loola dagalamaayo idaacadaha maxaliga ah. Sida barlamaankii shaqadiisa meesha looga saaray. Sida loola dagaalamo nin walbo oo ayaga ka aragti duwan. Sida baraha bulshada qarashka loogu bixiyo.
Ayadoo doorashadii ka dhiman tahay. 7 bilood. Hadana xaqiiqdii aan la ogeyn halka loo socdo.
Sida uu madaxweynuhu barlamaanka hor sheegay in doorasho qof iyo cod ah dalka ka dhaceyso. Sida uu yahay amaanka dalku.
Ina siyaad barre. Marwalbo wuu eedeyn jiray dowladihii isaga ka horeeyay wuuna xaqiri jiray si kacaankiisii loogu arko kuwa ugu fiican.
Ina farmaajo afkiisa ayaa laga hayaa. Kacaankii dowlad aan tan aheyn kama danbeyn.
Waxaas oo dhan marka laysu geeyo.
Dadka intooda badan wexey farmaajo u arkaan in uu ku sheqeynaayo. Aragtidii ina siyaad barre. Laakiin uu wacyiguna wacyigii aheyn. Awood uu wax ku muquuniyana uusan aheyn.
Marka sxb. Madaxweyne farmaajo. Waxaa laga rabaa in uu dadka hortooda yimaado. Ee uu shakiga ka saaro.
In uu cadeeyo mowqifkiisa dhabta ah.
Waxaa nasiib darro ah. In madaxweynuhu si indha la.aan ah u saxiixo dalka in ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Annagoo wada ogsoon xaalku halka uu maraayo.
Waxaa kaloo madaxweynaha weji gabax ku ah. In raisulwasarihii uu runta ku dhoco ee uu dhoho doorashadu waqtigeedii ayey ku dhecee. Waxaana qabaneynaa doorasho heshiis lagu wada yahay.
Marexaan nakala badbaadiya. Waan soo jeednaa kkjkkkjjj. Kaftan
Waa runtaa xukunka dheer ma fiicna cid jecelna ma jirto.
Aduunka oo dhan wuu soo maray xukunka dheer wax inaga Kaliya gaar ku ah ma aha.
Waa laga yaabaa in waqti jiitamo cillado farsamo awgeed balse iska ilow iska joogid dheer.
Wixii la isku haystay oo dhan In lagu baaiâ€™iyo Doorasho waa khalad waa in si dhab ah runta la isugu sheego.
Xukuumadan wey tagi hadii la dooran waayo balse yaa damaanad qaadaya inaan isdaba yaacu sii socon.
Dawladnimo dhab ah ayaa loo bahan yahay.
Waxba tarimayso kaana siib kana saar.
July 14, 2020 - 12:42 am
Anigu dadka aaminsan ayaan ka mid ahay. 4 sanaba qof cusub in ay siyaasad ahaan fashil tahay.
Calashaan qof la yiri. 4 sano shiinaha deg. 4 kalana ruushka 4 kalana London goormuu wax meel dhigan.
Laakiin su.aashu waxa weeye. Hadii dastuurka la bedelo ee la yiraa hal madaxweyne 3 mar oo isku xigto halla doorto. Ama xiliga madaxweynaha 10 ama 15 sano hallaga dhigu
Yaa damaanad qadaayo in uusan ka fekereyn inta loo doorto hadeey ka dhamaato. In uusan doorasho soo geli Karin ee uu iska tegaayo?
Horta hadaan indhaha lays tireyn wax walbo sidii la rabay uma socdaan. Laakiin madaxweyne aan dhaamin madaxweynihii ka horeeyo majiro.
Shariif. Cabdulaahi wuu dhaamay.
Xasan sheekh. Shariif waa dhaamay.
Farmaajana xasan sheekh waa dhamaa.
Calashaan meeshii loogu dhiibay yara meel dhaanto ayuu wax keenay.
Marka wax waxbeey dhamaane. Horta madaxweynuhu isagoo awooda haysto. In uu ogyahay in uu doorasho ku qasban yahay. In uu ogyahay hadii waqtigiisu dhamaado in tartan ama tanasul laga sugaayo. Wexey dhaanta mid meesha iska fadhiyo. Ee lasoo taagan Anigaa ugu fiican layma taaban karo.
Sxb isdhexyaaco wuu soconayaa. Ilaa inta dastuurkaan jini ama meesha laga saraayo ama la saxaayo.
Isdhexyaacu waa soconayaa inta ay jiraan maamulo beleed awood leh.
Isdhexyaacu waa soconayaa ilaa inta somaliland ama sifiican uga mid noqoto dowladnimada ama ay dhinac noo dhaafeyso.
Isdhexyaacu waa soconayaa. Inta madaxweynaha villa somaliya. Istaafkiisu amisom tahay.
Anigu waxaan isleeyahay. Dhibka ugu weyn ee dalkaan haysto in uu yahay. Dastuurkaan nin walbo qodobkii uu doono kasoo helaayo in uu yahay.
Hadaba waxaan u baahanahay.
Madaxweyne shaqadiisa ka bilaabo. Dastuurka. Ee ama saxo ama umadda u soo bandhigo ceebaha dastuurka waayoo madaxweyne kasto oo yimaado. Markuu sidaas u kala furo ee arko qurunka buuga noo yaal. Meel ayuu iska dhigaa.
Waxaan u baanahay. Madaxweyne dhiso maxkamad sare. Oo isaga ka madax banaan. Macna soo kordhinmeyso wiil yar inta meesha la keensado la dhoho Aniga waxaan rabo ii xukun.
Safarku waa dheer yahay. Qora isu dhiibku marka danbe wuxuu nagu geyn doonaa halkaan u soconay.
Ilaahey somalida xaqqa isku si ha u tuso.
July 14, 2020 - 2:04 am
dabshid waa daanyer aan akhlaq lahayn adna waxa
Tahay qabyaldiiste liita oo dhaqanka somaliyed aan
Wax ka aqoon waxay ahayd inaad runta u shegto
nin habeen iyo malin qof mayd ah cunaya wa duli
War sow ma ogid dad ehelkisa ah inaan waxan
Arkayan habeen iyo maalin sow ma ogid caruur u
Dhalay iyo waxay sii dhaleen inay soo boqdaan
Kalshaale oo aduunka oo dhan laga daalacdo
Mooryaan ayaa tihiin waxaad istahishan in Gacan la idin saaro nahisyo sayn leh
Waan ogahey inaad ka xanaaqsantihiin sideeba C/llaahi Mahbar EXILE loogu direy Farmaajana Calamada loogu lulaa.
Waxaan kaloo ognahey inaad la bugtaan sideeba C/llaahi Kabo-qaad Axmaaro
loogu diidey in lagu aaso XAMAR CADDE,
Runta haddaan kuu sheego, Shiikh Shariif ayaa naga baryey ee xitaa Meydkiisa in Xamar lama soo Mariyeen – shiikhan ku sharafney
Oo dhahey haddaan Quracdii Garowe
ka keenay ee naga daaya yaaney
dib geedihii ugu laabane.
Eebow meyd Jaajuus laguma aaso
Xamar, godadka Saxaraha Garowe ayuu ABEESADA ISKU WAREYSAN.
– Xamar maahan Xabaalo Biyo Qaad Meles Axmaar.
* Dambigiisi in la idinku qaado waaye, maanta u maadnaan Baroorateen
July 14, 2020 - 3:14 am
Horaan kuugu sheegay inaad daanyeer cuqdad qaba
Tahay dhaqan somali iyo Mid dadnimo ma lihid waxa
Ku haysa cuqdad daarood gud baadna la geli donta
Najis sayn leh
July 14, 2020 - 3:17 am
Oo Meles Axmaar markuu UN ka dhex lahaa Jiir AYAAN SOO DHAANSADEY oo SOMALIYA KA AH MINORITY- maxaadnan ugu jawaabin waa ninkii Af-Axmaarka ku heesi jiraye.
– Maryo Calas iga dheh
Maxaan Daarood cuqdad uga qaada waligey waxba iima dhibine, tankale soo ma ogid in Daarood badan ku jireen dagaalkii XAMAR LOOGA SAAREY MELES IYO MARYO CALAS MAHBAR.
Soo ma ogid Daarood badan inaan ku wadamudaharaadi jirney Safaarada Axmaarta
Soo ma ogid inaan Hayo Video
Nin Mariixaan ah iyo Majeerten isku dhex yeeray Xaflad aad Axmaaro kugu dhigteen
Markey Mahbareyn rabto ayey DAAROODEYSATAA. ha iga caayin Daarood maahan Mahbare.
Soo Max’ed Siyaad maaheyn ninkii adeerka Cirro dhahey adoo nool isku cabir Qabrigaada.
Waa Taariikh qoran
In caruur shalay dhalatay u sheejaynayo ayuu mooday.
Cabulahi Yusuf yaa Exile u diray asagaa iscasilay markuu mooryaantii Xamar ka buriyey adiga ku jirtay.
July 14, 2020 - 3:26 am
July 14, 2020 - 6:52 am
Waan ogahay adeerkay AUN Cabdulaahi Yusuf in aad ku colaadinayso Mooryaantii aad ku jirtay oo dalkaan 25 sano ayagoo ayeeyooyinka kufsanaya inta ciidan Puntland ka keensaday, Killilka 5naad Ethiopia in Mooryaaantii dalka xoog ku haysatay ka dhigay= Mid jaban, mid jiis ah, mid baxsad ah oo ayagoo kabna lulaya kabna laaladinaya qurbaha noogu yimidâ€¦
Kursigii Madaxweyne Somaliyeed inta Villa Somalia dhigay ku fariistay ilaa maanta yaal..
Dr Cali Maxamed Geedi ku yiri soo dhis dowlad..
Mooryaantii, Suudi Yalaxow, Qanyare, Filish, Daylaaf, Indhacadde iyo najis kale oo dhan ilaa maanta dhuuntaan.
In Qaxooti ku tahay London ninkii kugu qasbay in necbaatoâ€¦ Yaa la yaabay. not me.
Xamar maalintii geesi Cabdulaahi Yusuf galay ayaa mooryaantii Hawiye kala carareen.. Xasan Daahir Aways orod ku galay Asamara asoo leh, Aniga ayuu shaqsi ahaan ii socdaa oo xitaa diiday in dagaalamoâ€¦.kkkkkkkk
Dabshid iska ooy weligaaâ€¦waa ogahay meesha ku xanuunaysa marka Abdulaahi Yusuf maqasho.
Maantana Farmaajo ayaa saliida idiin cabira..
July 14, 2020 - 7:01 am
Maydkiisa reerkiisa diiday in lagu aaso Xamar oo doortay meeshii ku dhashay.
Maanta Xasan Abshir reerkiisa ayaa doortay in lagu aasin Xamar oo meeshii ku dhashay Garoowe lagu aaso.
Xamarse yaa ka xigtaa, adiga gobolada dhexe kasoo naq raacay.
Ma ciyaalbaa loo sheekayn
July 14, 2020 - 7:02 am
Ma ciyaalbaa loo sheekaynðŸŽƒ
July 14, 2020 - 7:16 am
YAM, Waxaan dhihi lahaa layga boob oo waa tan; “Sargaalka says:
â‰ˆÂ©â‰ˆKASAYSAN, GAABAN OO KOOBAN. WBT
Dabshid saxiib oday baad aheyde maradaa kaa dhacday.war meytida iska daa oawowgaa lagubye,mida labaad sidaad doonto u kaftan cid aad doontana wac ka sheeg laakiin meytida iska daa yaadan xujoobine
Inta dhimatay ALLA how naxariisto.
Nin walbo oo maalin dalkaan xil sare kasoo qabtay. Ama ha dhinto ama nolaado. Waala sheegayaa. Xumaan iyo samaan wuxuu lahaa.
Maxaa loo gubanayaa.
Islaan ciise iyo beeldaaje burhaan. Reer ahaan waad u difaaci kartaan. Madaama ay dhaqankiina yihiin.
Laakiin cabdulaahi yuusuf. Madaxweyne dalka soo maray. Oo itoobiya keenay caasimaddii 5 somaliyeed ayuu ahaa.
Ayadoo la xureynaayo Somaligalbeed Ninkii itoobiya lasoo jiray ee dhul somaliyeed calanka itoobiya ka taagay ayuu ahaa.
Yaan la sheegin waa dhintee miyaa la leeyahay waa la sheegayaa.
Xasan sheekh. Jigjigo ayuu booqday haduu dhinto iyo haduu nool yahay waala sheegayaa.
Farmaajo wuxuu itoobiya u dhiibay muwaadin somaliyeed. Haduu dhinto iyo haduu nool yahay waala sheegayaa.
Imaam dabshid. Wax kale ma sheegin ee intaas ayuu sheegay.
Hallaga xishoodo imaamka beelaha koofureed.
Dhaqan la maago dhaqan la maago ayuu leeyahay.
Horta Muxuu Deni Thumma Wallaahi ugaga reebay shirka Dhulmareeb?…
Mayitda cayda ha laga wada daayo, waa isku mide, ta M.S.Barre xalaal ma ahee ogoow…